Mobile Yakatungamira Rori Vagadziri & Vatengesi | China Nhare Yakatungamirwa Marori Fekitori
JCT 22㎡ yakatungamira bhodhi rebhodhi- ISUZU （Muenzaniso: E-YZD22） yakagadzirwa naJingchuan inzvimbo yekushambadzira inogona kufamba zvakasununguka, inochinja nguva ruzivo, nzira dzekutaurirana nenzvimbo. Iyo mhando nyowani yekushambadzira kutaurirana inotakura inosanganisa kushambadzira, kuburitswa kwemashoko uye kutepfenyurwa kwepamoyo.
Mumakore achangopfuura, vatengi vazhinji vekunze vanoda kushambadzira mota kuti dzive nemabasa akafanana neayo emota yekushambadzira ine skrini hombe inogona kutenderera uye kupeta, uye vanodawo kuti mota iiswe chassis yemagetsi, iri nyore kufamba uye kusimudzira chero kupi
Iyo E300 yekutengesa rori yakavakwa neTaizhou Jingchuan kambani iri neFotos chassis uye yakagadzirirwa themed yemukati dhizaini. Rutivi rori rinogona kuwedzerwa, kumusoro kunogona kukwidziridzwa kumusoro, uye multimedia zvishandiso zvakasarudzika senge magetsi emwenje, kuratidza kwe LED, odhiyo chikuva, danho rematanho, bhokisi remagetsi uye mutengesi wemarori
Iyo E400 yekuratidzira rori yakavakwa neTaizhou Jingchuan kambani iri neFotos chassis uye yakagadzirirwa themed yemukati dhizaini. Rutivi rori rinogona kuwedzerwa, kumusoro kunogona kukwidziridzwa kumusoro, uye multimedia zvishandiso zvakasarudzika senge magetsi emwenje, kuratidza kwe LED, odhiyo chikuva, danho rematanho, bhokisi remagetsi uye mutengesi wemarori
Mobile Yakatungamira Screen Rori, Mobile Yakatungamira Kushambadzira Rori, Akatungamira Mobile Trailer, Nhare Yakatungamirwa Billboard Rori, Akatungamira Nhare Yekutengesa, Akatungamirira Mobile Rori,